၂၀၀၀ပွညျ့နှဈအစောပိုငျးတုနျးက K-pop အိုငျဒေါတှအေဖွဈ ပှဲဦးထှကျခဲ့ကွပွီး သရုပျဆောငျဘကျပွောငျးခဲ့ကွတဲ့ မငျးသမီးမြား - Lifestyle Myanmar
၁၉၉၀ နှငျ့ ၂၀၀၀ ပွညျ့နှဈ အစောပိုငျးဟာ K-pop “idol” ယဉျကြေးမှု ဖွဈခဲ့ကွပါတယျ။ K-pop ယဉျကြေးမှု ထှနျးကားလာတာနှငျ့အမြှ နှဈစဉျနှဈတိုငျး idol group အသဈတှေ မြားပွားလာခဲ့ပါတယျ။ K-pop အဖှဲ့တှအေမြားကွီးထဲမှ အတျောမြားမြားဟာ မြိုးဆကျသဈ အိုငျဒေါတှအေတှကျ နရောဖယျပေးလိုကျရတာ ရှိသလို ယခုအခြိနျထိ အောငျမွငျမှုတှနေဲ့ ရပျတညျနကွေဆဲဖွဈတဲ့ အိုငျဒေါတှလေညျး ရှိနပေါတယျ။ ယခု ဖျောပွပေးမှာကတော့ ၂၀၀၀ခုနှဈအစောပိုငျးတုနျးက ကပေေါ့အိုငျဒေါ့တှအေဖွဈ ပှဲဦးထှကျခဲ့ကွပွီး သရုပျဆောငျဘကျကို ပွောငျးလာတဲ့ မငျးသမီးတှပေဲ ဖွဈပါတယျ။
၁။ Jewelry’ အဖှဲ့ဝငျ Park Jung Ah နဲ့ Lee Ji Hyun
Jewelryအဖှဲ့ မှာ အဆိုတျောတှေ အဖွဈကနေ သရုပျဆောငျ ဘကျကိုပွောငျးလိုကျကွတဲ့ အဖှဲ့ဝငျအတျောမြားမြား ရှိခဲ့ပါတယျ။ Park Jung Ah နဲ့ Lee Ji Hyun ဟာ ၂၀၀၁ခုနှဈတုနျးက Jewelry’ အဖှဲ့ဝငျတှအေဖွဈ ပှဲဦးထှကျခဲ့တဲ့ လေးယောကျထဲက နှဈယောကျဖွဈပါတယျ။
Park Jung Ah ကို tvN ရဲ့ “Oh My Ghostess” နဲ့ MBC ရုပျသံရဲ့ “Glamorous Temptation တို့မှာ တှရေ့ငျ သငျမှတျမိကောငျး မှတျမိပါလိမျ့မယျ။
Lee Ji Hyunရဲ့ လတျတလော အနုပညာလှုပျရှားမှုက MBC ရုပျသံရဲ့ “Victory Tomorrow” ဖွဈပါတယျ။
Kim Ye Won ဟာ မူလက Jewelry အဖှဲ့ဝငျလေးယောကျထဲမှာ မပါဝငျခဲ့ပမေယျ့ ၂၀၁၁ခုနှဈတှငျ အဖှဲ့ထဲမှာ ပါဝငျခဲ့ပွီး နောကျပိုငျးမှာ သရုပျဆောငျလိုငျးကို ပွောငျးခဲ့ပါတယျ။“Mr. Temporary,”ဇာတျကားထဲမှာ ဆရာမတဈယောကျအဖွဈ သရုပျဆောငျထားပါတယျ။
၂။ M.I.L.K. အဖှဲ့ဝငျ Seo Hyun Jin နဲ့ Park Hee Bon
M.I.L.K. ဟာ၂၀၀၁ခုနှဈက ပှဲဦးထှကျခဲ့ပွီး SM Entertainment ရဲ့ အဈမ BM Entertainment အောကျမှာ ဖွဈပါတယျ။ သူတို့ရဲ့ အသကျမှေးဝမျးကြောငျးက ခဏတာပဲဖွဈပမေယျ့ သူတို့ထဲက နှဈယောကျကတော့ သရုပျဆောငျဘကျကို အောငျမွငျစှာ ပွောငျးလဲနိုငျခဲ့ပါတယျ။
Seo Hyun Jin ဟာ MBC ရုပျသံရဲ့ “The Duo” မှာ စတငျသရုပျဆောငျပွီး မကွာသေးခငျက JTBC ရဲ့ “Beauty Inside” မှာ ခေါငျးဆောငျမငျးသမီးအဖွဈ ပါဝငျခဲ့ပါတယျ။
Park Hee Bon ဟာ “Goblin”ဇာတျကားမှာ Ji Eun Tak’s (Kim Go Eun‘s) ရဲ့အမအေဖွဈ သရုပျဆောငျခဲ့ပါတယျ။ လကျရှိမှာ SBS ရုပျသံရဲ့ “Secret Boutique“ဒရမျမာကားမှာ သရုပျဆောငျထားပါတယျ။
၃။ Sugar အဖှဲ့ဝငျ Hwang Jung Eum, Park Soo Jin, နဲ့ Han Ye Won
Sugar အဖှဲ့ဟာ ၂၀၀၂ခုနှဈတှငျ SM Entertainment အောကျမှာ ပှဲဦးထှကျခဲ့ပါတယျ။ ၂၀၀၆ခုနှဈတှငျ ဖကျြသိမျးတဲ့အထိ ဂပြနျနှငျ့ ကိုရီးယားနှဈနိုငျငံလုံးက အားပေးခဲ့ကွပါတယျ။
Hwang Jung Eum ဟာ နာမညျကွီး Kဒရမျမာအနညျးငယျမှာ ပါဝငျခဲ့ပါတယျ။ MBC ရုပျသံရဲ့ “High Kick Through the Roof,” “Kill Me Heal Me,”နဲ့ “She Was Pretty.တို့မှာ သရုပျဆောငျခဲ့ပါတယျ။
Park Soo Jinဟာ Bae Yong Joon နှငျ့ လကျမထပျခငျက KBS2 ရုပျသံရဲ့ “Boys Over Flowers,” SBS ရုပျသံရဲ့ “My Girlfriend isaGumiho,” နှငျ့ tvN’ ရုပျသံရဲ့ Flower Boy Next Door.”တို့မှာ သရုပျဆောငျခဲ့ပါတယျ။
Han Ye Won ဟာလကျရှိအနုပညာလှုပျရှားမှု မရှိသေးပမေယျ့ SBS ရုပျသံရဲ့ “Shining Inheritance” မှာ လီဆောငျးဂီရဲ့ ညီမငယျအဖွဈ သရုပျဆောငျထားပါတယျ။
၄။ LUV အဖှဲ့ဝငျ Jeon Hye Bin နဲ့ Oh Yeon Seo
LUV ဟာ ၂၀၀၂ခုနှဈတှငျ SidusHQ အငျတာတိနျးမနျ့အောကျမှာ ပှဲဦးထှကျခဲ့ပွီး တဈနှဈသာ ကွာခဲ့ပါတယျ။ အဖှဲ့ဝငျတှဟော solo တှနေဲ့ အောငျမွငျခဲ့ကွပွီး သရုပျဆောငျဘကျကို ပွောငျးလဲခဲ့ကွပါတယျ။
LUV ကိုဖကျြသိမျးပွီးနောကျ Jeon Hye Bin ဟာ တဈကိုယျတျော အယျလျဘမျကို ဖွနျခြီခဲ့ပွီး နောကျပိုငျးမှာ သရုပျဆောငျဘကျကို ပွောငျးခဲ့ပါတယျ။ သူမဟာ tvNရုပျသံရဲ့ “Another Oh Hae Young.မှာ Seo Hyun Jin နှငျ့အတူ သရုပျဆောငျခဲ့ပါတယျ။ လကျရှိမှာ KBS ရုပျသံရဲ့ “Liver or Die” ဇာတျကားနဲ့ “Leverage တီဗီဇာတျလမျးတှငျ သရုပျဆောငျထားပါတယျ။
MBC ရုပျသံရဲ့ “Jang Bo Ri Is Here” ဇာတျကားဟာ အဆငျ့သတျမှတျခကျြ ၄၀ရာခိုငျနှုနျးရရှိခဲ့သော Oh Yeon Seo ရဲ့ အထငျရှားဆုံး ဇာတျကားဖွဈခဲ့ပါတယျ။ သူမဟာ SBS ရုပျသံရဲ့ “Please Come Back, Mister” ဇာတျကားနှငျ့ tvN ရုပျသံရဲ့ “Hwayugi.”တို့မှာ အဓိကဇာတျကောငျအဖွဈ သရုပျဆောငျထားပွီး မကွာခငျမှာ “People With Flaws.”ဇာတျကားမှာ မွငျရဦးမှာ ဖွဈပါတယျ။
၂၀၀၀ပြည့်နှစ်အစောပိုင်းတုန်းက K-pop အိုင်ဒေါတွေအဖြစ် ပွဲဦးထွက်ခဲ့ကြပြီး သရုပ်ဆောင်ဘက်ပြောင်းခဲ့ကြတဲ့ မင်းသမီးများ
၁၉၉၀ နှင့် ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ် အစောပိုင်းဟာ K-pop “idol” ယဉ်ကျေးမှု ဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်။ K-pop ယဉ်ကျေးမှု ထွန်းကားလာတာနှင့်အမျှ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း idol group အသစ်တွေ များပြားလာခဲ့ပါတယ်။ K-pop အဖွဲ့တွေအများကြီးထဲမှ အတော်များများဟာ မျိုးဆက်သစ် အိုင်ဒေါတွေအတွက် နေရာဖယ်ပေးလိုက်ရတာ ရှိသလို ယခုအချိန်ထိ အောင်မြင်မှုတွေနဲ့ ရပ်တည်နေကြဆဲဖြစ်တဲ့ အိုင်ဒေါတွေလည်း ရှိနေပါတယ်။ ယခု ဖော်ပြပေးမှာကတော့ ၂၀၀၀ခုနှစ်အစောပိုင်းတုန်းက ကေပေါ့အိုင်ဒေါ့တွေအဖြစ် ပွဲဦးထွက်ခဲ့ကြပြီး သရုပ်ဆောင်ဘက်ကို ပြောင်းလာတဲ့ မင်းသမီးတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
၁။ Jewelry’ အဖွဲ့ဝင် Park Jung Ah နဲ့ Lee Ji Hyun
Jewelryအဖွဲ့ မှာ အဆိုတော်တွေ အဖြစ်ကနေ သရုပ်ဆောင် ဘက်ကိုပြောင်းလိုက်ကြတဲ့ အဖွဲ့ဝင်အတော်များများ ရှိခဲ့ပါတယ်။ Park Jung Ah နဲ့ Lee Ji Hyun ဟာ ၂၀၀၁ခုနှစ်တုန်းက Jewelry’ အဖွဲ့ဝင်တွေအဖြစ် ပွဲဦးထွက်ခဲ့တဲ့ လေးယောက်ထဲက နှစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။
Park Jung Ah ကို tvN ရဲ့ “Oh My Ghostess” နဲ့ MBC ရုပ်သံရဲ့ “Glamorous Temptation တို့မှာ တွေ့ရင် သင်မှတ်မိကောင်း မှတ်မိပါလိမ့်မယ်။
Lee Ji Hyunရဲ့ လတ်တလော အနုပညာလှုပ်ရှားမှုက MBC ရုပ်သံရဲ့ “Victory Tomorrow” ဖြစ်ပါတယ်။
Kim Ye Won ဟာ မူလက Jewelry အဖွဲ့ဝင်လေးယောက်ထဲမှာ မပါဝင်ခဲ့ပေမယ့် ၂၀၁၁ခုနှစ်တွင် အဖွဲ့ထဲမှာ ပါဝင်ခဲ့ပြီး နောက်ပိုင်းမှာ သရုပ်ဆောင်လိုင်းကို ပြောင်းခဲ့ပါတယ်။“Mr. Temporary,”ဇာတ်ကားထဲမှာ ဆရာမတစ်ယောက်အဖြစ် သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။
၂။ M.I.L.K. အဖွဲ့ဝင် Seo Hyun Jin နဲ့ Park Hee Bon
M.I.L.K. ဟာ၂၀၀၁ခုနှစ်က ပွဲဦးထွက်ခဲ့ပြီး SM Entertainment ရဲ့ အစ်မ BM Entertainment အောက်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းက ခဏတာပဲဖြစ်ပေမယ့် သူတို့ထဲက နှစ်ယောက်ကတော့ သရုပ်ဆောင်ဘက်ကို အောင်မြင်စွာ ပြောင်းလဲနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
Seo Hyun Jin ဟာ MBC ရုပ်သံရဲ့ “The Duo” မှာ စတင်သရုပ်ဆောင်ပြီး မကြာသေးခင်က JTBC ရဲ့ “Beauty Inside” မှာ ခေါင်းဆောင်မင်းသမီးအဖြစ် ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။
Park Hee Bon ဟာ “Goblin”ဇာတ်ကားမှာ Ji Eun Tak’s (Kim Go Eun‘s) ရဲ့အမေအဖြစ် သရုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ လက်ရှိမှာ SBS ရုပ်သံရဲ့ “Secret Boutique“ဒရမ်မာကားမှာ သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။
၃။ Sugar အဖွဲ့ဝင် Hwang Jung Eum, Park Soo Jin, နဲ့ Han Ye Won
Sugar အဖွဲ့ဟာ ၂၀၀၂ခုနှစ်တွင် SM Entertainment အောက်မှာ ပွဲဦးထွက်ခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၀၆ခုနှစ်တွင် ဖျက်သိမ်းတဲ့အထိ ဂျပန်နှင့် ကိုရီးယားနှစ်နိုင်ငံလုံးက အားပေးခဲ့ကြပါတယ်။
Hwang Jung Eum ဟာ နာမည်ကြီး Kဒရမ်မာအနည်းငယ်မှာ ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ MBC ရုပ်သံရဲ့ “High Kick Through the Roof,” “Kill Me Heal Me,”နဲ့ “She Was Pretty.တို့မှာ သရုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။
Park Soo Jinဟာ Bae Yong Joon နှင့် လက်မထပ်ခင်က KBS2 ရုပ်သံရဲ့ “Boys Over Flowers,” SBS ရုပ်သံရဲ့ “My Girlfriend isaGumiho,” နှင့် tvN’ ရုပ်သံရဲ့ Flower Boy Next Door.”တို့မှာ သရုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။
Han Ye Won ဟာလက်ရှိအနုပညာလှုပ်ရှားမှု မရှိသေးပေမယ့် SBS ရုပ်သံရဲ့ “Shining Inheritance” မှာ လီဆောင်းဂီရဲ့ ညီမငယ်အဖြစ် သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။
၄။ LUV အဖွဲ့ဝင် Jeon Hye Bin နဲ့ Oh Yeon Seo
LUV ဟာ ၂၀၀၂ခုနှစ်တွင် SidusHQ အင်တာတိန်းမန့်အောက်မှာ ပွဲဦးထွက်ခဲ့ပြီး တစ်နှစ်သာ ကြာခဲ့ပါတယ်။ အဖွဲ့ဝင်တွေဟာ solo တွေနဲ့ အောင်မြင်ခဲ့ကြပြီး သရုပ်ဆောင်ဘက်ကို ပြောင်းလဲခဲ့ကြပါတယ်။
LUV ကိုဖျက်သိမ်းပြီးနောက် Jeon Hye Bin ဟာ တစ်ကိုယ်တော် အယ်လ်ဘမ်ကို ဖြန်ချီခဲ့ပြီး နောက်ပိုင်းမှာ သရုပ်ဆောင်ဘက်ကို ပြောင်းခဲ့ပါတယ်။ သူမဟာ tvNရုပ်သံရဲ့ “Another Oh Hae Young.မှာ Seo Hyun Jin နှင့်အတူ သရုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ လက်ရှိမှာ KBS ရုပ်သံရဲ့ “Liver or Die” ဇာတ်ကားနဲ့ “Leverage တီဗီဇာတ်လမ်းတွင် သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။
MBC ရုပ်သံရဲ့ “Jang Bo Ri Is Here” ဇာတ်ကားဟာ အဆင့်သတ်မှတ်ချက် ၄၀ရာခိုင်နှုန်းရရှိခဲ့သော Oh Yeon Seo ရဲ့ အထင်ရှားဆုံး ဇာတ်ကားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ သူမဟာ SBS ရုပ်သံရဲ့ “Please Come Back, Mister” ဇာတ်ကားနှင့် tvN ရုပ်သံရဲ့ “Hwayugi.”တို့မှာ အဓိကဇာတ်ကောင်အဖြစ် သရုပ်ဆောင်ထားပြီး မကြာခင်မှာ “People With Flaws.”ဇာတ်ကားမှာ မြင်ရဦးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။